Olmaa Oromiyaa, Waxabajjii 13, 2020
[ May 6, 2021 ] Police hold children in ‘dire’ conditions in Ethiopia’s Oromiya – rights commission	English
[ May 6, 2021 ] Ethiopia’s transition is dead, dialogue vital – Payton Knopf, Deputy to US HoA Envoy Jeffrey Feltman	English
[ May 6, 2021 ] Ethiopia: Unlawful Raid and Search of the OLF Chairman, Mr. Dawud Ibsa’s House	English
[ May 6, 2021 ] Ethiopia’s murderous new era	English
HomeAfaan OromooOlmaa Oromiyaa, Waxabajjii 13, 2020
[SBO – Waxabajjii 13,2020] Ajjechaa Waxabajjii 08,2020 halkan Godina Baalee magaalaa Diinshoo keessatti waraanni mootummaa Itophiyaa kan humna addaa Oromiyaa jedhamuun dargaggoo Saadiq H/Ibroo irratti fudhatameen walqabatee gaaffiin ummatni kaase sirnaan waan hin deebi’inii fi dhimmi ajjechaa nama kanaa xumura seeraa waan hin argatiniif guyyaa har’aa Waxabajjii 13,2020 ummatni addatti dargaggootni magaalaa Diiinshoo keessatti mormii itti fufeera. Waraanni/poolisootni mootummaa gaaza imimmaansu ummatatti darbuunis mul’ateera.
Jaal Marroon “kan dursu sirna badaa buqqisuu dha,” jedha.
“Elaamee Yaa Oromookoo!
Siidaa Minlikiin buqqisuuf yeroo gubuu caalaa sirna gabrummaa Minlik gad dhaabe buqqisuuf lafee gubuutu wayyaa dha! Osoo Sirni Gabrummaa Minlik Oromiyaa keessatti gad dhaabe hundeen buqqa’ee, Fardi Oromootuu Minlikiin dugdatti baatee dhaabbachuu ni qaaneffata! Ofirraa kuffisee kotteen dhaanee irraa himimsa!
Kan hundaa qabaannu yoo biyya qabaanne qofa!!
Kan Oromoo ajjeesaa jiru sirna malee siidaa Finfinnee dhaabbatu miti. Biyyoonni mallattoo siidaa kolonii buqqisaa jiran erga biyya ofii qabaatanii booda siidaan waan kaleessaa isaan yaadachiisu ijatti isaan toluu dinnaan mirga dabalataa waan isaanitti tole godhaa jiru.
Biyya Addunyaa kanaarratti namoonni mirga guutuu qaban sanarra darbanii gaafa waan dalaganfaa dhaban an qullaa deemuun fedha, an nama saalaan walfakkaannu waliin bultii ijaarratuun fedha…kun mirgakooti naaf haa kabajamu jedhu.
Nut garuu akka namaattuu namummaa waakkatamnee dachee keenyarratti akka bineensaatti adamfamnee ajjeefamaa jirra. Eenyummaa oftahummaa keenyaan balfamnee gatii lubbuun bineendaa tokko qabullee hanqifamnee du’a akka malee du’aa jirra.
Qaanii gabrummaa akkasii Addunyaa kanarratti hiriyyaa hin qabne akka Sabaatti keessa jirru kana keessaa bahuu kan dandeenyu jalqaba sirna gabrummaa yoo hundeerraa cicciruu dandeenye qofaa dha!
Gaafas dachee Oromiyaa bilisa taate Irra dhaabbatee fardi Abbaa Gadaa Siidaa koloneeffataa baatu hin jiraatu!”
Bara 1960 keessa Afaan Oromootiin Moqaadishoo oduu addunyaatti
Diriba: The incursion pp made on Mr Dawud Ibsa Ayana leader of OLF, a veteran politian, symbolic freedom fighter is one…